Shiinaha F1 Warshad wax shiida iyo alaab-qeybiyeyaasha | Ares
Taxanaha ololka ee wax shiidiyaasha sagxada hoostiisa astaanta Ares.
Dabaqaha dabaqa ee taxanaha F1 ee hoos yimaada astaanta Ares.
Furimaha Dagaalka dabaqa F1 waa qalab wax lagu shiido dhulka oo khaas ah oo loogu talagalay dhismo yar yar. Qalabku waa fudayd oo leh Furimaha Dagaalka sagxadda la qaadan karo, wuu ku xariifsan yahay naqshadaynta oo fudud in lagu shaqeeyo. Mashiinka si dhakhso ah ayaa loo kala diri karaa, markaa way ku habboon tahay in la qabto oo la raro.
Waxaa lagu qalabeeyaa saxan abrasive abrasive abrasive xirfad leh design cross, aagga saxan abrasive waa weyn, waxa ay si buuxda u shiiddo karaa dhulka, ka hortagga ifafaale ee daadinta iyo shiidi yar si loo hagaajiyo tayada dhismaha ee dhulka.
Qaabka mashiinka wuxuu qaataa dhumucdiisuna tahay derbiga sare iyo birta xoogga sare leh, goynta laser samaynta alxan la'aan.
Qalabka aluminiumka ah ee xoogga leh oo dhan-hal-hal-ku-ool ah wuxuu ku qalabaysan yahay qalabka saxda ah iyo xirmooyinka noocyada caanka ah ee caanka ah, sidaas darteed si dhow ayaa loogu hawlan yahay, taas oo aan ahayn kaliya saameyn kuleyl ah oo wanaagsan laakiin sidoo kale waxay u wareejisaa tamarta kinetic oo leh waxtar sare leh.
1. Saxanka shiida ee xirfadlayaasha ah, Daboolka wax shiida sabeynaya, hawl aad u siman.
2. Awood xoog leh, waqti badan oo badbaadiya.
3. Farsamo casri ah, farsamayn sax ah oo dheeraad ah.
4. Ururinta siigada, ilaalinta deegaanka iyo caafimaadka oo wanaagsan.
5. Hal-abuurka farsamada, hawlgal xasiloon.
6. Walxaha la isku halayn karo, la isku halayn karo oo aad u waara.
7. Naqshad awood leh, qaab qurux badan.
8. Yar yar, Furimaha Dagaalka dhulka.
Furimaha dabaqa F1 wuxuu isticmaalaa mashiinnada korantada ee si fiican loo yaqaan, beddelka, hubinta tayada iyo saameynteeda shaqo ee joogtada ah waa mid cajiib ah; Tani waa habka ugu wanaagsan ee wax lagu shiido dabaqa.
Mashiinku wuxuu ku qalabaysan yahay naqshadaynta qaadista, fudud oo sahlan oo ku habboon habka rarista iyo dejinta si ay si dhakhso ah u beddesho qalabka.
Laba gears si loo hagaajiyo miisaanka counter-weight, sida waafaqsan xaaladda shaqada ee kala duwan ee cadaadiska hagaajinta dabacsan; Waxay bixisaa xal sagxad ah oo wanaagsan.
Baadiyaha qarsoon, waana lagu qarin karaa mashiinka. Ma saameynayso muuqaalka guud.
Nidaamka xakamaynta isku dhafan, shaqada guddiga hawlgelinta waa mid kooban oo cad.
F1 mashruuc halbeegga
Mashiinka oo dhan Miisaanka 385KG
Cabirka (dhererka, ballaca, dhererka) 1200*700*1050
ordaya Motor wax soo saarka 20HP
Xawaaraha kacaanka 0～1800RPM
Soo noqnoqda 20HP
Xarunta Dalool nadiifinta siigada 2INCH*1
saxannada shiida/ saxannada shiida 4/12 Gballaca duuban 700mm
Xaaladaha shaqada ee lagu dabaqi karo Dabaqa la taaban karo Lagu dabaqi karo maaddo PCD, dheeman, shiidi la taaban karo, shiidi dhoobada, Shiidi xabagta
Hore: F0 Furiyaha
Xiga: F2 Furiyaha
Mashiin wax shiida flat, Mishiinka Shiida Geedaha, Baabuurka shaambada faaruqinta, Furimaha Dagaalka Dabaqa, Soo saarista Kuraasta Baabuurka, Mashiinka Waxshiidka Xawaaraha Sare,